Fakafaka: fahamarinana, mbola lalain’ny Malagasy? | NewsMada
Tafiditra ao anatin’ny fahendrena malagasy ny fikatsahana ny marina. Tsy nentiny tamin-kery na novolavolaina tamina lela miakatra anefa izany fa norantoviny avy ao anatiny, avy amin’ilay fanahy maha olona azy. Nolalainy fatratra io marina io hany ka nirindra sy nilamina nanaraka izay ny fiarahamonina nisy azy.
Mila ampahafantarina sy aseho ho hitan’ny taranaka malagasy izany tsy hahatonga azy ireny hihevitra fa ny be vola, ny be sandry, ny malama vava, ny avo feo, sy izay iray tarika amin’ireo rehetra ireo akory no manana mandrakariva ny marina.
Manampy indrindra amin’ny fandalana ny marina ny fampianarana ny ankizy sy ny tanora ary ny Malagasy rehetra fa nisy sy misy ary hisy hatrany ny todin’ny natao ka aleo mitandro fatratra ny fahamarinana… Sa ve efa tsy matahotra izany intsony ny Malagasy? Ho sarotra ny hiarenan’i Madagasikara raha sanatria, sanatria, sanatria ka lasa vahoaka tsy mataho-tody ny Malagasy!